IiRetreats zeMonsoon-Igqibelele ukuBukela iiNtaka - I-Airbnb
IiRetreats zeMonsoon-Igqibelele ukuBukela iiNtaka
Igumbi lakho lokulala e indawo yokuhlala nenesidlo sakusasa sinombuki zindwendwe onguSubish
I-Monsoon Retreats lishishini lokhenketho le-Agro cum Eco apho siqhuba ukhenketho oluzinzileyo nolunoxanduva lolondolozo lwendalo ephilayo kunye nokulwa nokutshintsha kwemozulu ngokukhuthaza ukhenketho olunekhabhoni. Yiba yinxalenye yokwenza eli hlabathi libe yindawo engcono yokuhlala kwaye uvumele ukuphila.
Ngeentlobo ezingaphezu kwama-85 zeentaka. Iimonsoon retreats ziye zaba yeyona ndawo ifanelekileyo kubabukeli beeNtaka. Siye samphepha umabonakude njengoko ejika abe yinkathazo xa ekunye neTropical Bio-diversities.
Indlu ye-stilt eyilwe ngendlela yokuba ime ngeemitha ezili-10 ngaphezu komhlaba inika umthi House imvakalelo. Endaweni yezitepsi, siye sakha izitebhisi zohlobo lweleli ukuze ube nemvakalelo yokwenyani ye-machan. Ke ngoko asiyicebisi kubantu abadala abanemiba yokunyuka kwileli kunye namanenekazi akhulelweyo. Zonke ii-cottages zahlukene kunye negumbi lokuhlambela eliqhotyoshelweyo kunye ne-balcony enhle yokuphumla kwaye ujabulele ukuhlukahluka kweentaka.
Kukho izindlu zangasese ezintlanu. I-cottage nganye ihlalwa kabini kwaye ibonelela abantu aba-3. Ngoko ke le propati ifanelekile kwiqela labantu abangekho ngaphezu kwe-15. Asinaso isifudumezisi samanzi ashushu kodwa sinokucwangciswa ngokwesicelo. Amagumbi akhululekile kumabonakude, ukuze i-ambience yendalo igcinwe ingaguquki. Ixesha lakusasa nangokuhlwa njengelona lihle nge-cacophony yeentaka ezijikelezayo, njenge-balm epholileyo yentliziyo kunye nomphefumlo odiniweyo, ngamanye amazwi, indawo efanelekileyo yababukeli beentaka. Sibonelela ngokutya okumnandi nokwesintu kweKerala ekhaya kodwa kuba kungabandakanywanga kwiphakheji njengesidlo sakusasa, siya kucela iindwendwe zethu ukuba zisazise ukuba zijonge phambili kwisidlo sasekhaya.
IThekkady kwiSithili saseKerala, eyona ndawo inkulu yezilwanyana zasendle yaseIndiya yindawo yokuphupha kubakhenkethi abandwendwela eIndiya. Idama le-'Surki' leminyaka eyi-120 elakhiwa ngaphesheya kwePeryiar, iPoorna ngentetho yeVedic, yeyona ndawo inomtsalane kubakhenkethi. Le ndawo ingcwele isasazeke kwindawo eyi-777 Sq.Kms, ingqongwe lichibi elenziweyo ngaphaya kommandla wama-25 Sq.Kms. Indawo yogcino lweTiger ekuphela kwayo, iThekkady, kunye nobutyebi bayo obuyintabalala bezityalo nezilwanyana zetropikhi lelona dama liphezulu lezinto ezininzi. uhlobo olusengozini kunye nenkcubeko ecebileyo yezizwe. IThekkady lizulu elimnandi emhlabeni kwabo bathanda indalo
Mna ngokwam ndiya kufumaneka ngalo lonke ixesha lokuhlala kwakho. Xa ndingekho amalungu osapho ahoye iindwendwe.